Mametraka Virtualbox amin'ny ArchLinux | Avy amin'ny Linux
Androany vao nametraka Laptop aho fa tsy mitovy amin'ilay ampiasako amin'ny mpiara-miasa amiko, saingy tsy mampiasa toa ahy izy Qemu-KVM, saingy mora kokoa ny miasa Virtualbox.
Mametraka Virtualbox ao ArchLinux mora ihany. Manokatra terminal izahay ary mametraka:
Aorian'izay dia ampianay ao amin'ny vondrona ny mpampiasa anay vboxusers:
Manidy ny fivoriana izahay ary miditra indray. Manatanteraka amin'ny terminal izahay
Mihazakazaka Virtualbox izahay ary manamarina fa tsy misy lesoka. Ankehitriny, mba tsy hamitantsika ny baiko teo aloha isaky ny mandeha dia mamorona ilay rakitra izahay vbox.conf miaraka amin'ny baiko:
Ary napetrantsika tao anatiny:
Averina indray ary dia izay ..
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Mametraka Virtualbox amin'ny ArchLinux
Izany ve no virtualobx ny VirtualBox OSE na ny VirtualBox izay natambatr'i Oracle? Hatramin'ny Debian Wheezy dia nametraka ny Virtualbox aho, fa ny ekipan'i Debian no nanangona (ny sary sy ny sary ampiasaina ao amin'ny fikandrana "about" dia avy amin'ny fanontana OSE).
Efa nakariko ny Arch ISO hahafahako milalao amin'ny PC virtoaly.
rasputin dia hoy izy:
Ary tsy mpampiasa debian ianao? inona no nanjo an'i xcfe? tsy miteny ve ianao hoe tsara noho kde? -.-
Mamaly an'i rasputin
Fotoana lava, lava, elaela vao niova ny hevitro, kely kely 😀
Raha ny amiko dia ny manavao ireo programa ampiasako matetika indrindra no tadiaviko fa tsy ny rafitra ENTIRE toa ny zava-misy amin'i Arch. Mba hilalaovana ny kernel vaovao sy hankafizako ireo kinova farany farany isaky ny singa GNU / Linux dia tsara ny Arch.
Toa nijanona tsy mpitsidika matetika ilay namana raputin.
Tokony ho ampy ny miditra indray, mba hampiharana ny fanovana eo amin'ny fikirakiran'ny vondrona mpampiasa. Na dia mamelombelona aza ny restart XD.
java dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara,
Amin'ny alàlan'ny elav, fanontaniana kely dia milaza ianao fa mampiasa Qemu-KVM ianao, azo atao ny mametraka ny milina virtoaly amin'ny Widescreen efijery feno, satria tsy vitako izany fa amin'ny Virtualbox eny, raha azo atao dia azonao atao ny milaza amiko hoe ahoana.
Misaotra sy arahaba,
Eny, ny tena ezahiko indrindra dia ny Full Screen ary raha mety amiko 😀
Eny, mazava ho azy fa azoko apetraka amin'ny écran feno io, fa amin'ny 4: 3 dia tsy vitako amin'ny Widescreen izany, fa amin'ny Virtualbox dia afaka.
Izay no fanontaniana.
Marina izany, tsy nanandrana aho .. Raha mahomby aho dia manome hevitra eto por
Eny, miaraka amin'ilay fanahafana napetrakao teo amin'ity lahatsoratra ity teo aloha, mazava ho azy fa fahagagana izany. Mampihomehy, raha ny momba an'i Debian Stable dia tsy tokony hatao daholo izay dingana napetrakao ao amin'ny Arch, satria vita ho azy izany.
jorgecg dia hoy izy:
Eny, toa mora ny mametraka azy.
Misaotra amin'ny torolalana.
Mamaly an'i jorgecg
/ Dev / tohivakana foana dia hoy izy:
Tsy mampiasa Arch aho, fa tsara ho fantatra… ..
Mamaly / dev / null
Tsy ampiasaiko koa fa omeko tsirony.
Universe mifanitsy O:
psalama dia hoy izy:
Toa namaky ny saiko ianao. Androany dia nieritreritra ny hametraka boaty virtoaly fotsiny aho ary nieritreritra fa efa ampy ny sudo pacman -S virtualbox avy eo dia tadiavo ao amin'ny menio kde ary kitiho raha hampandeha azy.
Kolontsaina ankapobeny ho an'ny tsy manana traikefa toa ahy: inona ny olana hitranga amin'ny fametrahana azy araka ny noheveriko fa vita ary inona ny tombony azo amin'ny fomba anoloranao hevitra?
Mamaly an'i ppsalama
Ny zava-mitranga dia i @elav dia manampy ireo fonosana izay ahitana ireo modely fampiantranoana VirtualBox, izay zava-dehibe ho anao ny maka tahaka tanteraka ny rafitra fiasa. Ho fanampin'izay, manampy koa ny fonosana misy ny Guest Additions ISO raha haka tahaka ny Windows, Mac na distro GNU / Linux hafa ianao.
Ary ny baiko farany dia ny fandaharana ny maodely mifehy ny tetezana VirtualBox mba hihazakazaka foana rehefa mandrehitra ny PC ary tsy mila mampihetsika azy ireo amin'ny tanana.
Izay ihany no hohazavaina.
Fanazavana tsara. Fantatro fa ny fametrahana ny virtualbox-guest-iso sy ny virtualbox-host-modules dia ho fanatanterahana tsaratsara kokoa ny OS virtoaly.
Etsy an-danin'izany, ao amin'ny torolàlana sudo gpasswd -fampiasa $ USER vboxusers, mila apetrako ao amin'ny "USER" na aiza ve ny "USER USER" ny anarako?
Ary ny zavatra farany iray: raha tsy tianao ny hihazakazaka miaraka amin'ireo herinaratra rehetra ireo modely fanaraha-maso tetezana virtualbox, ahoana no ahafahanao mamorona launcher izay mampiakatra ireo modules ireo ary avy eo manokatra virtualbox (izany hoe, isaky ny iriko fa tsy amin'ny herin'ny hery rehetra? )?
Raha teôria rehefa mametraka US USER dia raisinao ny mpampiasa anao, izay amin'ny farany dia mitovy amin'ny fametrahana:
Nokapohinao aho tamin'ny fanazavana.
Fantatro tamin'ny anaran'ny fonosana izany fa manome alalana ny mpampiasa amin'ny vboxusers, satria ny US USER io dia mitovy amin'ny mpampiasa ampiasainao amin'izao fotoana izao (fa tsy faka).
Mikasika ny fanontanianao farany dia tsy afaka namaly anao aho. Tokony hanomboka hampiasa ny Arch aho hilazana aminao ny fomba tokony hametrahana azy, na dia misy koa ny wiki wiki hanampy anao amin'ireo fanontaniana VirtualBox rehetra ireo.
Eny, amin'ny ankapobeny, izany no fametrahana azy. Fa rehefa vitanao izany, raha tsy ataonao ny zavatra hafa rehetra dia mety hiseho ny lesoka 😉
Misaotra ... Nanoratra ny hevitra teo aloha aho rehefa tonga ny anao
Marina izany. Jereo raha hisy plugin mivoaka miaraka amin'ny hafatra toy ny "Fanehoan-kevitra vaovao eo ambony / ambany" toy ny ao amin'ny Disqus.
Ny marina dia mampiasa Debian aho, fa ny olona izay eo akaikiko foana dia mampiasa andohalambo, ary tsy manelingelina ahy mihitsy, fa mahatoky aho, mitazona ny DEBIANAKO
Eny, mahay ny Debian sy Slackware aho, fa ny tena mety amiko indrindra dia ny Slackware (na dia tiako aza i Iceweasel, tsy manelingelina ahy amin'ireo fanavaozam-baovao hatrany).
Raha ny marina dia efa ela aho no niaraka tamin'ny linux, ary tena nandeha herintaona aho, ary nanomboka tamin'ny debian aho ary maty niaraka tamin'ny debian + KDE
Azafady .. Inona no dikan'io fanehoan-kevitra io? Miresaka ny fametrahana VirtualBox amin'ny ArchLinux izahay. 🙁
Nanomboka daholo àry isika. Mety hampiasa ilay terminal ianao afaka iray volana sy sasany.
Mampiasa ny faran'ny 8 volana lasa aho satria mankafy ilay efijery mainty kely
Miaraka amin'ny Arch na Slackware, ho tianao kokoa izany.
tsy hanova ny saiko ianao …… Tsy hiteny ny anaran'ny distro tiako intsony aho satria raha tsy izany dia manaratsy ahy ny namako elav… hahahahaha
tsy misy serieux, jereo, debian dia zavatra manokana ho ahy, tsy milaza aho hoe zavatra kely ny andohalambo, fa izany no masontsivana, ampahafantaro anao fa ao amin'ny solosainako dia manana sticker roa aho, ny iray amin'ireo andohalambo ary ny iray an'ny debiana, miseho ary iray amin'ny batman, na tsia, 2., 2 an'ny batman izy ireo ... XD
Eny, ny tiako momba an'i Debian dia ny fahaizan-javatra ananany eo amin'ny lampihany (ary ao an-trano dia manana ny PC miaraka amin'i Wheezy miaraka amin'ny famotsorana Iceweasel), ary momba ny Slackware, izy no modularity tanteraka omeny ahy rehefa mitantana ireo fonosiny.
Vao haingana aho no nifindra monina avy tao amin'ny GNOME 3.4 mankany amin'ny KDE noho ny fianjeran'ny voalohany rehefa namono an'i Nautilus niaraka tamin'ny FileRoller ho mpanelanelana, ary rehefa namoaka rakitra dia nikatso ary nanjavona imbetsaka ny tontonana.
Aha, amin'ny "fahendrenao" an'ny linuxear * herintaona mahery kely *.
Eny, rehefa manana bebe kokoa ianao dia hiresaka momba ny Arch Linux indray izahay.
aca dia hoy izy:
Tena tsara, efa ela aho tsy tena nampiasa vbox.
Na dia mahita sudo aza aho ary ny zavatra eritreretiko voalohany dia ny ubuntu 😛
Ny SUDO dia toy ny sosona fanampiny ahafahana mampiasa asa sasany ho superuser, saingy voafetra.
Izaho manokana dia tsy zatra mampiasa SUDO mandraka ankehitriny ary mampiasa superuser mivantana amin'ny PC Debian ahy.
Salama elav. Misaotra anao nanao an'ity karazana fampianarana ity, ho an'ireo olona vao manomboka, toa ahy.
Tena tiako ity pejy ity, satria tsy elitista io.
Raha te hilaza ny marina dia efa nampidina ny Arch ISO aho mba hahafahako miaina manokana ny zavatra tsapan'ny mpandefa zana-tsipìka rehefa nametraka ilay distro KISS + RTFM voalohany izy ireo.
Salama, mampiasa virtualbox aho rehefa mampiasa Linux (ubuntu, fedora na openSUSE) hanao ny tamba-jotra laniko sy hampiofana mpizara miaraka amin'ireo mpanjifa mandresy, linux, sns. na izany aza, BSD, mila manana tetezana na tetezana aho, mametraka milina vitsivitsy ao anaty tambajotra anatiny ary napetrak'ireo mpizara ho tetezana miaraka amin'ny pc ara-batana izay atao vavahady ary manome ny internet, mora ho ahy ny ataovy amin'ny boaty virtoaly, miaraka amin'ny kvm-quemu dia nanandrana aho indray mandeha, saingy tsy mora izany, ary tsy vitako, ataovy izay rehetra nataoko na nataoko tamin'ny virtoaly, azonao atao ve ny manampy anay amin'ny fanaovana tutorial (ho faly be aho) ahoana ny fampifandraisana eo anelanelan'ny milina virtoaly, na misy ny rafitra fiasa sy ny masinina misy kvm-quemu mampiasa interface graphique? miarahaba hatrany.
Misaotra fa hiezaka aho
ArchiLinux, mizaha toetra azy ihany koa aho, fotsiny fa manana olana kely aho fa tsara izany ary tsara kokoa raha fantatro koa ny fomba fametrahana ny GuestAdditions miaraka amin'ny Windows ho Host ary ArchLinx koa ilay virtoaly. Miarahaba 😀
Izahay ihany no nametraka: sudo gpasswd - vboxusers $ USER na raha tokony ho $ USER dia apetraka ao amiko ny anaran'ny mpampiasa sudo gpasswd - vboxusers $ leonardopc1991 $, fanontaniako ihany izany
US USER ihany
Phaquencio dia hoy izy:
TSIA! apetrakao ny anaran'ny mpampiasa anao amin'ny arko raha ny mpampiasa anao dia leonardoLOL gpasswd - vboxusers leonardoLOL tsy misy famantarana $
Mamaly an'i faquencio
Vampire dia hoy izy:
Mahagaga ny fahaizany ahy, raha tsy mametraka ahy hanomboka intsony ny fametrahana VirtualBox Extension Pack avy amin'ilay kinova azo sintonina 4.2.18, tsy maintsy esoriko ny extension ary ilay virtoaly dia 4.2 ihany koa.
Mamaly an'i vampira
Tsy mbola tara ny misaotra anao noho ny torolàlana fametrahana ...
Salama afaka manampy ahy amin'ity olana virtualbox ity aho. raha vonoina ny kapila virtoaly sasany, hamafa ny tranoko ilay folder antsoina hoe VirtualBox VM. Ary izao aho miditra amin'ny boaty virtual Tsy azo idirana amin'ireo kapila ireo, saingy tsy afaka mamafa azy ireo aho na zavatra hafa.
Inona no ataoko mba hamafana izany? Misaotra.
Avelako ny sary
Fandraisana anjara tsara. Nanampy betsaka ahy tamin'ny Linux Manjaro anao ianao.
Soso-kevitra amin'ny Systemd dia misy lesoka raha ampiasaina ny tetezana eo anelanelan'ny tambajotra tsy misy tariby sy tariby, zavatra sarotra nitranga tamiko ny fametrahana mpizara LTSP izay ilaiko ny mampifandray ireo tambajotra roa ary ny vahaolana dia ity baiko ity.
Miarahaba ny rehetra, jereo fa manaraka ny dingana aho fa manome ahy an'ity lesoka ity ny terminal, ary tsy hitako intsony izay hatao:
modprobe: FATAL: Module vboxdrv tsy hita.
Raha afaka manome tanana ahy ianao dia tiako izany, misaotra.
Tena mila fanavaozana ity lohahevitra ity fa manana hadisoana mitovy aho ary mahita ny datin'ny fanehoan-kevitro, azo lazaina ve fa efa antitra ireo dingana fametrahana ireo?
Valiny amin'ny mpiambina
Jacob tuz dia hoy izy:
Mendrika labiera izy ireo, ahoana no fomba ahazoako azy ireo?
Valiny tamin'i Jacob Tuz
Salama, nametraka boaty virtoaly tao amin'ny gnome arch Linux aho, narahiko ny dingana rehetra fa rehefa fanatanterahana azy dia tsy manomboka virtoaly izany, inona no tsy nety nataoko?
jaimenadal dia hoy izy:
Raha te-hamorona milina virtoaly misy adaptatera amin'ny tetezana ianao dia tsy maintsy manatanteraka ity andalana manaraka ity:
sudo modprobe vboxnetflt. Raha tsy izany dia mahazo an'ity lesoka ity ianao:
Tsy nahavita nanokatra / namorona ny tambajotra anatiny 'HostInterfaceNetworking-wlan0' (VERR_SUPDRV_COMPONENT_NOT_FOUND).
Ny iray amin'ireo maodelin'ny kernel dia tsy vita tsara. Hamarino tsara fa tsy misy modely kernel avy amin'ny verison VirtualBox taloha. Avy eo manandrana mamerina sy mamerina mametaka ireo modely kernel amin'ny alàlan'ny fanatanterahana '/etc/init.d/vboxdrv setup' ho faka
Mamaly an'i jaimenadal
Miala tsiny, adinoko ihany koa ny manampy fa tsy maintsy apetrakao ny repertoire-n'ny net-tools:
sudo pacman -S net-fitaovana.
Amboary ny fisie:
sudo nano /etc/modules-load.d/virtualbox.conf ary ampio:
Avy eo, manatanteraka amin'ny alàlan'ny baiko izahay:
Tokony hamafana ny lesoka nolazaiko teo aloha io ary hahafahantsika manomboka VirtualBox ho azy miaraka amina adaptatera misy tetezana.
Mametraha servera ady amin'ny Debian